Mitohy ny fanafintohinana raharaha Bahamas | Hevitra MPANOHARIANA
Tsy ampy ny mpitory
Raha toa ka ny ministera ihany no mitory io olona io dia mazava ho azy fa izay onitra mifanandrify amin'izay nahavoadona ny ministera ihany no hisy vokany.
Fa raha ilaina ny ahatongavana amin'io tanjona lazain'i jentilisa io hoe tokony manonitra roa na telo avo heny ilay ampangaina, dia tsy maintsy mametraka fitoriana mazava ireo olona rehetra niharan'ny fitaka, na nandoa vola na tsy nandoa vola nefa noraisina ny taratasy rehetra momba azy (promesse d'embauche)
Nampidirin'i papozy @ 10:51, 2007-09-19 [Valio]
erko fa androany izy no hadihadiana, tsy mahafoana ny ahiahy anefa izany ka izay no anaoratako mialoha eto. Raha voatazona hatrami'nny farany izy tsy izany ve no rariny?
Nampidirin'i jentilisa @ 15:59, 2007-09-19 [Valio]
na ireny mpitondra ambony ireny aza anie mety voarebirebin'ny mpisoloky vazaha (=vahiny) avo lenta e. tsaroanareo ny flamco ?
arakaraky ny mampamirapiratra y volabe no mahasintona ny lolo fotsy...
Nampidirin'i Rajiosy @ 16:59, 2007-09-19 [Valio]